Accueil » Chronique » Ny andaniny sy ny ankilany
Mamalan-kira tamin’ny 7 janoary 2009. Toa mbola tsy malazo ihany indray koa, febroary 2021. Mifamadika fotsiny ny toeran’ny andaniny sy ny ankilany. Tsy afa-bela. Hevitra natsipy iraikambinifolo taona lasa, ary mbola atoraka ankehitriny: «Tsy misy mainty sy fotsy izany fotsiny ny fiainana. Tsy misy hadivory sanatria ho hantsana mampisaraka ny andaniny sy ny ankilany. Ny rano natao ho lakanina, ny hady natao ho toharina, ny hevitra natao ho aravona».
Misy tokoa ny tsy mahafaly, maro ny mana fin tohina, betsaka izay nihoatra ny loha. Tsy lavorary tanteraka, tsy tapitr’ ohatra velively, ny fitondran-dRa[…]. Tokony hanonganam-panjakana anefa ve izany? Fa angaha tsy misy fomba hafa, ndao atao hoe «demokratika», ankoatra ny rotaka, fitokonana, filaharana an-dalambe? Inona moa no atao hoe mpanao politika, ary mendrika ny haja sy voni­nahitra omena izany: mpametraka ny fanontaniana saro-baliana, mpitady ny vaha-olana manahirana, ho tombontsoan’ ny tanindra­zana.
Raha io mason-tsivana io, firy no mendrika ho mpanao politika eto Madaga­- sikara? Ny fanaovana politika tsy hoe ampy mihogahoga an-dalambe na mibodo gazety na mibahana haino aman-jery. Inona no tanjona: tombontsoan’ny firenena ve, mahasoa ny besinimaro ve, mendrika ny Tantara ve? Inona avy no dingana ahafahana miady amin’ny jadona satria asan’ny kamo sady mandrava hefa ny fidinana an-dalambe?
Fantatrareo ve fa efa ela tokoa aho no tsy mana­raka haino aman-jery gasy intsony? Ny antony, tsotra: ny MBS sy ny mpiara-dia aminy tsy manao afa-tsy miaro ny Filohan’ny Repoblika; ny groupe VIVA tsy manao afa-tsy mandokaloka ny Ben’ny Tanan’Antananarivo (NDLR: aza adino fa voalohandohan’ny janoary 2009 isika no miresaka). Vahoaka tokam-po ohatra izany, na tamin’ny 1991 na tamin’ny 2002, no mampandatsa ankehitriny izao. Tsy misy mainty sy fotsy izany fotsiny ny fiainana. Tsy misy hadivory sanatria ho hantsana mampisaraka ny andaniny sy ny ankilany. Ny rano natao ho lakanina, ny hady natao ho toharina, ny hevitra natao ho aravona.
Izao, antsoina ny vahoaka hivavaka ankalamanjana etsy Ambohijatovo (NDLR: tsiahivo hatrany fa voalohandohan’ny janoary 2009 ity lahatsoratra ity). Avy eo angamba dia ho taomina hilahatra eny amin’ny 13 mey. Filaharana tsy nahitan’ny firenena tombontsoa, na 1972, na 1991, na 2002. Toekarena vao mitraka, mitambo­- tsitra avy hatrany. Filaminana korontanin’ny sain-drotaka. Fahefam-panjakana voazimba. Filaharana mitaky fanozonana, filaharana manantena fahagagana, filaharana mila voatsiary, filaharana mivavaka amin’ny Mesia, filaharana arahin-datsa. Milahara e, milahara foana, aza miala amin’ny maro, ndeha manara-drenirano, sotroy ny ronono an-tavy, hano ny kobaka ambava: ravinkazo entin-drano, ka indrisy, izay toeran-kitodiana toa tsy hisy.
Sélection d’un expert national en cadre réglementaire « Spécialiste des cadres réglementaires des produits agricoles ».